Sint Maarten - MPA Design | Fiaretana haran-dranomasina
Sint Maarten - Famolavolana MPA
Ny fananganana ny valan-javaboahary marobe ao Sint Maarten, Karaiba
Ny nosy Sint Maarten / Saint Martin, any Andrefana, dia mizara eo anelanelan'ny Martin Saint-Frantsay any Avaratra (53 km2) ary ny Holandey Sint Maarten any atsimo (34 km2). Saint Maarten dia anisan'ny fanjakan'ny Holandy. Ny manodidina ilay nosy manodidina ny km 202 ny haran-dranomasina.
Ny vatohara any St. Maarten. Sary © Nature Foundation St. Maarten
Ny St. Maarten dia niaina ny fiposahan'ny fizahan-tany voalohany nanombohan'ny 1960, fony i Kioba dia nakatona voalohany ny fizahan-tany. Ny St. Maarten izao dia iray amin'ireo toeram-pizahantany fizahan-tany lehibe indrindra any amin'ny faritra Andrefana ary manodidina ny 85% amin'ny toeram-piasany miasa any amin'ny fizahan-tany fizahan-tany na fizahan-tany. Tsy misy ny jono ara-barotra lehibe, ny 10-15 ihany no manjono sy ny fanjonoana an-tsambo ho an'ny marlin (Makaira spp.) sy mahi-mahi (Coryphaena spp.).
Hatramin'ny vao haingana dia tsy dia nisy fitantanana ny governemanta momba ny tontolo iainana an-dranomasina tao St. Maarten. Ao amin'ny 1997, ny Natiora Natiora St. Maarten dia natsangana mba hananganana sy hitantanana zaridaina an-dranomasina ao St. Maarten, arakaraka ny fifanarahana avy amin'ny governemantan'i St. Maarten. St. Maarten no hany firenena tany Karaiba Holanda izay tsy nanana valan-javaboahary an-dranomasina, noho izany ny tolo-kevitra mikendry ny hahatratra ny paritéa eo anelanelan'i St. Maarten sy ireo firenena hafa any Karaiba. Ny endriky ny valan-javaboary novolavolaina dia niorina tamin'ny fanorenana faritra voaaro an-dranomasina tany Bonaire. Na izany aza, dia be loatra ny fandaharan'asa (mety ho tafiditra ny rano rehetra any amin'ny faritra misy an'i St. Maarten) ary sarotra ny mahazo fanohanana ara-politika. Ny tombotsoan'ny indostrian'ny sambo, ny mpanjono ary ny mpividy entana dia nanao izany fanamby izany ho an'ny mpanao politika ao St. Maarten. Ankoatr'izay, raha ny biraon'ny faritra niarovana an'i Bonaire dia nanana mpiasa tao amin'ny 54, nanana olona telo ihany ny St Foundation Natiora St. Maarten. Ny zaridaina dia nijanona ho antoko iray monja mandra-pahatongan'ny 2010.
Ny vatoharan'i St. Maarten dia niteraka fahasimbana maharitra noho ny fitomboan'ny fizahan-tany haingana sy ny drafitra sy ny fotodrafitrasa tsy dia tsara ary ny tsy fisian'ny fitantanana rano. Ny rivodoza sy ny hetsika fanadiovana haran-dranomasina dia nahatonga ny fihenan'ny 80% amin'ny rakotra vatohara amin'ny tontolo amoron-tsiraka.
Ao amin'ny 2010, ny Natiora Natiora St. Maarten dia novolavolaina tamin'ny fomba ofisialy mba hamoronana zaridaina an-dranomasina tsara tantana, miaraka amin'ny faritra tsy misy dikany hitodika amin'ny fitomboan'ny fandrahonana. Ny Fikambanana dia nanao drafitra telo nisesy mba hahazoana fanohanana avy amin'ireo mpanapa-kevitra momba ny orinasa fiaramanidina an-dranomasina. Voalohany, ny Tahirim-bolam-panjakana dia nanao fanombantombanana ara-tontolo iainana ny haran-dranon'i St. Maarten. Ity fianarana ity dia namaritra faritra manokana - ny vatoharan-dranon'ny haran-dranomasina sisa - ho laharam-pahamehana ho an'ny fiarovana. Nanavao ny zaridaina novolavola izy ireo mba hiarovana ireo sehatra ireo - mampiseho ny 25% amin'ny faritry ny faritry ny firenena, ary mandrakotra ny haavon'ny 10,000.
Fanaraha-maso ny mpiasa ao amin'ny zaridainam-biby ao Man of Shoals. Sary © Mauricio Handler / DCNA / NPL
Avy eo dia vita ny fianarana ara-toekarena momba ny tontolo iainana an-dranomasina tamin'ny fampiasana ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaofomba avy amin'ny Ivontoerana momba ny harena ankibon'ny tany. Ity fomba haingana sy maloto ity dia natao ho mora ampiasaina amin'ny mpitantana. Tamin'ny fanadihadiana ireo tompona mpividy entana, mpanjono, mpizahatany ary mpandray anjara hafa avy amin'ny fizahan-tany fizahan-tany, ny fianarana dia afaka nandoko sary mampiseho ny maha-zava-dehibe ny fiompiana an-dranomasina tsara ho an'ny ekonomian'ny St. Maarten.
Farany, ny Nature Foundation St. Maarten dia nandray ny vokatra avy amin'ny fanombanana ara-tontolo iainana sy ny fanombanana ara-toekarena ara-toekarena ho an'ny fiarahamonina mba hikarakara ny valan-javaboary an-dranomasina. Ny Foundation dia nanao fampisehoana nandritra ny fivorian'ny fiarahamonina, niresaka tamin'ireo mpanjono sy mpandraharaha mpanafaka, ary nanolotra ny Parlemanta. Tamin'ny volana desambra 30, 2010, no nametrahana ny lehilahy ny Shoals Marine Park.
Ny iray amin'ireo dingana voalohany ho an'ny zaridaina an-dranomasina dia ny famolavolana rafitra fitsangatsanganana ho an'ny sambo mitoka-monina mba hisorohana ny fahavoazana fanampiny amin'ny vatofantsika mivantana eo amin'ny vatohara. Talohan'ny sy nandritra ny fametrahana ny valan-javaboary an-dranomasina, ny fototra dia nitarika tatitra goavana mba hanazavana ny antony mahatonga ireo vatofantsika hanimba ny vatohara. Taorian'ny fanorenana ilay valan-javaboary, ny orinasam-barotra madinika ao St. Maarten dia nandoa ny fananganana ny rafitra fananganana fiara hoentina any ambany.
Sokatra Hawksbill Sary © Nature Foundation St. Maarten
Vetivety dia manantena ny hanitatra ny valan-javaboary ho an'ny hôtely 35,000 ny Fondation, izay hanamafy izany amin'ny zaridaina eo amin'ny lafiny frantsay amin'ny nosy. Satria ny sisin-tanin'ny valan-javaboahary amin'izao fotoana izao dia ahitana ny ampahany amin'ny vatohara izay tsara indrindra ho an'ny fanjonoana sy ny fanjonoana, ireo faritra manana rano mafana sy vatomamy tsara indrindra, ny fikajiana dia zava-mitranga kokoa, satria anisan'izany ny rano mihandrona izay ampiasaina Mora kokoa amin'ny fanjonoana sy ny fanjonoana.
Ny Fondation dia manadihady ny fitomboan'ny isan'ny mponina amin'ny karazana trondro sasany amin'ny alalan'ny fanadihadiana isan-taona. Tao amin'ny 2013, hitany fa navitrika ny mponina sy ny mpiray tanindrazana, nampiseho fampitomboana ny 10-15% ary ny mpanao gazety dia mitatitra fitomboan'ny trondro. Ny Fondation dia manomboka avarona (Acropora cervicornis) sy ny haran-dranomasina elkhorn (Acropora palmata) ary manantena ny hanaparitaka ireo tahiry ireo any amin'ireo faritra manana kalitaon'ny rano mba hanatsarana ny fahasitranan'ny vatohara.
Ny fandraisana anjaran'ny mpandray anjara dia fanalahidy. Ny fampidirana ireo mpandray anjara sy ny fiarahamonina ao an-toerana dia manan-danja amin'ny fanatanterahana tanjona amin'ny fiarovana. Nankany amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny fivorian'ny vondrom-piarahamonina ny Fondation ary nanome famelabelarana fohy sy tsotra. Raha tokony hanaraka ny famelabelarana miaraka amin'ny fivoriana mahaliana sy valiny, ny mpiasan'ny Fondation dia nitaky fanehoan-kevitra avy amin'ny rehetra. Amin'ny fanatontosana tsy ara-potoana ireo sehatra ireo, dia afaka niresaka sy nihaino ny olona izy ireo, ary noho izany dia nifampiresaka tamim-pahombiazana tamin'ny fifandraisana tamin'ireo mpikambana tao amin'ny vondrom-piarahamonina tamin'ny fomba izay nahafinaritra kokoa azy ireo.
Ny fanombanana ara-toe-karena ny ecosystems dia fitaovana matanjaka sy mandresy lahatra. Na dia mety ho adihevitra aza izany, dia nanampy ilay tranga ho fiarovana amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny tombontsoa ara-toekarena amin'ny serivisy momba ny tontolo iainana izay fomba mahomby hahatongavana amin'ny mpanapa-kevitra fototra.
Ny fifandraisana mahomby dia tokony ho laharam-pahamehana. Ny fifampiresahana ny maha-zava-dehibe ny fiarovana dia mety ho sarotra, fa mba hahazoana fanohanana ara-politika sy malaza ho an'ny fiarovana, dia tsy maintsy manao izany ny mpahay siansa amin'ny alàlan'ny fitaovana rehetra azo atao (Facebook, Twitter, Instagram, ary ny fampahalalam-baovao mahazatra).
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPrince Bernhard Nature Fund
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoUS National Fish and Wildlife Foundation
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharanasa momba ny tontolo iainana momba ny tontolo iainana ao Karaiba, Fandaharanasa momba ny tontolo iainana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Valan-javaboarin'ny World Wildlife Netherlands
Fanatanterahana ny fandaminana ny Fondation ho an'ny fampandrosoana Antilles any Etazonia (USONA)
Fonon'ny MINA Antilles any Antilles
Fiantohana KNAP Fund Antilles any Antilles
Ny INNO Fund
St. Maarten Harbour Holding Company (SHHC)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSt.
Lottery nasionaly nasionaly Lottery
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNatiora St. Maarten
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDutch National Nature Alliance
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Governemantan'i Sint Maarten
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy renivohitra kôlô: Ecosystem Valin'ny fanapahan-kevitra noraisina tany Karaiba, Institiota maneran-tany
Nosoratan'i: Tadzio Bervoets, Natiora Natiora St. Maarten, Sint Maarten
Ity fikarohana ity dia novana tamin'ny: Cullman, G. (fanovàna) 2014. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLoharanom-paharetana fanananamanokatra fisie PDF : Fampihorohoroana momba ny fahantrana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana amin'ny rafi-nosy. Ivon-toerana momba ny harena voajanahary sy ny fiarovana, ny Museum American History of Natural History, New York, NY.
Webinar ho avy amin'ny teny Espaniôla sy anglisy - Brigade Reef: Valinteny haingana sy fanamboarana haran-dranomasina vonjy maika any Quintana Roo, Mexico